VaObama Vanosvika muSouth Africa
WASHINGTON — Mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, vakasvika muSouth Africa neChishanu murwendo rwavo rwekushanyira nyika dzemu Africa. NeChina vainge vari kuSenegal uye vakabva muSouth Africa, vari kuendawo kuTanzania.
Mutevedzeri wemutungamiri wechipangamazano mubazi rezvekudzivirirwa kwemukati menyika yeAmerica, VaBen Rhodes, vanoti vari kutarisira kuti VaObama vachataura nyaya yeZimbabwe muhurukuro dzavo nemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma.
VaZuma ndivowo mutongi gava panyaya yeZimbabwe. VaRhodes vanoti ukatarisa nyika dzakaita seSouth Africa neSenegal dziri kushanyirwa naVaObama, unonyatsoona mutsauko wakakura nezviri kuitika muZimbabwe panyaya yehutongi hwejekerere.
VaRhodes vashora nyaya yeZimbabwe yekusaita sarudzo dzakachena uye kusunga nekushungurudza vatori venhau nevemasangano akazvimirira. VaRhodes vanoti kudyidzana kweAmerica neZimbabwe kungaitwe chete kana munyika maita sarudzo dzakachena .VaObama vari kupinda muSouth Africa apo vaimbova mutungamiri wenyika iyi, VaNelson Mandela, vari kurwara muchipatara chemuPretoria.
VaObama vaudza vatori venhau kuti chido chavo kushanyira VaMandela muchipatara asi zvinoenderana nekuti hutano hwavo hunenge hwamira sei pavanosvika muSouth Africa. Vatiwo izvi zviri kumhuri yaVaMandela kuti vovashanyira here. VaObama vanoti VaMandela igamba repasi rose.
VaObama vachashanyira neMugovera jeri re Robben Island rakagara VaMandela kwemakore akawanda.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari chipangamazano cheInternational Crisis Group kuchamhembe kweAfrica, VaTrevor Maisiri, vanoti havaone VaObama vachiteererwa neZanu-PF kana vakataura nyaya yekuti munyika muitwe shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika.